Geessitoota karaa lamaan saaguu ni dandeessa: akka barruutti yookiin akka qabduutti. Dubbiiwwan lamaanuu keessatti, barruun mul'ataan URL irraa adda tahuu ni danda'a.
Galmee barruu keessaa sarara murtaa'e utaaluuf, jalqaba bakka sanatti toorbarruu galchi(Saagi - Toorbarruu).
Geessitoonni Naannessaa irraa harkisanii ka'uudhaanis saagamuu ni danda'u. Geessitoonni wabii, matadureewwan, saxaatoowwan, gabateewwan, wantoota, galeeloo yookiin toorbarruuwwan agarsiisuu ni danda'u.
Geessituu barruu kan Gabatee 1 agarsiisu keesssa saaguu yoo feete, galfata Gabatee 1 Naannessaa irraa harkisiiti barruu keessa kaa'i. Kana gochuuf, haalatni harkisuu Akka Geessituutti Saagi Naannessaa keessaa filatamuu qaba.
Title is: Geessitoota Saaguu